नेपालको झण्डा बारे अनाैठाे रहस्य, पढौ खोजमुलक इतिहास | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेपालको झण्डा बारे अनाैठाे रहस्य, पढौ खोजमुलक इतिहास
नेपालको झण्डा बारे अनाैठाे रहस्य, पढौ खोजमुलक इतिहास
मंसिर ४ गते, २०७६ - १२:०७
काठमाडाैं । संसारभरि नै एकमात्र त्रिकोणात्मक झन्डा नेपालको छ । यो सनातन धर्म–संस्कृति एवं योग दर्शनमा आधारित छ । यसले नेपाल स्वतन्त्र देश हो भन्ने सन्देश दिएको छ । यसैले यो स्वतन्त्रताको प्रतीक एवं पर्याय हो । प्राचीन कालदेखि नै यो झन्डाको अस्तित्व रहेको पाइन्छ । लिच्छविकालमा बनेका मन्दिरका द्वारमा यस झन्डाले स्थान पाएको छ।
लिच्छविकालमा तामाका विभिन्न किसिमका निकै टकहरू पाइएका छन्। तिनमा ‘श्रीमानांक’ अंकित टक पनि एक हो । विभिन्न साइजका ‘श्रीमानांक’ मुद्रा अरुभन्दा केही बढी मात्रामा प्राप्त भएका छन् । तिनमा ध्वजासहित सिंहको मूर्ति अंकित (श्रीमानांक) मुद्रा विशेष उल्लेखनीय छ । यी ‘श्रीमानांक’ मुद्रामा अंकित लिपि चाँगुको स्तम्भ लेखको लिपिसँग ट्वाक्क मिल्ने हुनाले ‘श्रीमानांक’ मुद्रा प्रसिद्ध मानदेवकै हो भन्ने कुरा निश्चित हुने नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको धनबज्र बज्राचार्यको लिच्छविकालमा अभिलेख (२०५३, पृ.८)मा उल्लेख छ ।
एक हजार पाँच सय वर्ष पुरानो मानांक मुद्रामा नेपालको वर्तमान ६ कोणयुक्त झन्डालाई दायाँ खुट्टा उचालेर सिंहले सलाम गरेको अंकित छ । त्यसबेला यसलाई स्रयन्सो भनिन्थ्यो । अंशुबर्माले पनि यसै झन्डालाई अपनाए । उनले यसको नाम ‘ध्वज’ नामाकरण गरे भने मल्ल राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले यसलाई धातुमा बनाएको दयाराम श्रेष्ठले ‘नेसनल फ्ल्याग अफ नेपाल एन्ड इन्ट्रोडक्सन’ (सन् १९९८, पृ.२८)मा उल्लेख गरेका छन् ।
सिंह राजसंस्थाको प्रतीक र झन्डा जनताको सामूहिक भावना र सार्वभौमिकताको प्रतीक हो । राजसंस्था विधिविधानको अधिनमा रहनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। यसरी नेपालमा संवैधानिक राजसंस्थाको अभ्यास लिच्छविकालदेखि नै रहेको पाइन्छ।
लिच्छविहरू वैदिक मूल्य–मान्यताका अनुयायी भएको हुँदा यो झन्डा वैदिक मान्यताको उपज हो भन्नु अत्युक्ति नहोला । सायद यति पुरानो झन्डा अहिले कुनै पनि राष्ट्रको नहोला।संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘झन्डा’ पुस्तकमा नेपालको झन्डालाई मौलिक हिन्दू परम्परामा रहेको भनी उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा दयाराम श्रेष्ठले सोही पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् (पृ. १३)।
लुम्बिनी क्षेत्रको उत्खनन्मा पाइएको यस झन्डाबारे ‘असहमति’ (२०७१, पृ. ५०)मा सौरभ लेख्छन्, ‘लुम्बिनी उत्खनन्ताका सगरहवाको स्तूप नम्बर– ८ को पीँधमा पाइएका इँटहरूमध्ये एउटा झन्डायुक्त छ । यो बुद्धधर्मका अष्टमंगलहरूमध्ये एक विजयध्वजा हो, जससँगै श्रीवत्स, त्रिशूल आदियुक्त अरु आठ इँट छन्।
पिसी मुखर्जीको कपिलवस्तु क्षेत्रका प्राचीन वस्तुहरूको खोजीसम्बन्धी रिपोर्टमा छापिएको प्रस्तुत चित्रबाटै थाहा हुन्छ, यो चारकुने झन्डा होइन । यी स्तुपहरू कोशल सेनापति विरुधकले इसापूर्व चौधौँ शताब्दीमा कपिलवस्तु ध्वस्त गर्नुअघिको मान्दा पनि हाम्रो झन्डाको उमेर २५ सय वर्ष पर जान्छ । सिद्धार्थ गौतमको जन्म वैदिक परम्पराको क्षेत्र लुम्बिनीमा भएको र बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि गौतम बुद्ध बने । गौतम बुद्धभन्दा अगाडिदेखि नै यस झन्डाको प्रचलन त्यहाँ रहेको हुँदा यो झन्डाले वैदिक परम्परा, मूल्य–मान्यताको अर्थबोध गर्छ।’
अनुमान गरिए अनुसार त्यही कारणले गर्दा चन्द्र चिह्नलाई सूर्य चिह्नभन्दा माथि अंकित गरिएको हो । यो के कुराको पनि परिचायक हो भने यहाँ योगीहरू र राजाहरूलाई बराबर महंखव दिइएको संयोग रहेको छ । अर्थात् के पनि भन्न सकिन्छ भने यो राष्ट्रध्वज सहअस्तित्वको प्रतीक हो । यसको छहारीमा विभिन्न वर्गका बीचको वैमनस्यता नभएर सामूहिक मेलमिलाप र प्रेमजन्य भावना रहेको छ । ऐतिहासिक दृष्टिबाट विहंगम गर्दा यसलाई चन्द्रवंशी र सूर्यवंशीहरूको गहनतम् एकाकारको प्रतीक मान्न सकिन्छ।
योगी यतीन्द्रनाथले ‘गोरख वाणी और गोरख योग’ पुस्तकमा हठयोगलाई सूर्य र चन्द्रमाको प्रतीक मानेका छन् । ‘ह’ को अर्थ सूर्य र ‘ठ’ को अर्थ ‘चन्द्र’ हुन आउँछ । यिनको योगलाई हठयोग भनिन्छ । प्राण, अपानवायु जसलाई सूर्य चन्द्रमाको संज्ञा दिइन्छ, यसलाई ऐक्यबद्ध गर्ने जुन प्राणायम हो त्यसलाई हठयोग भनिन्छ (पृ.९१) ।
नेपालको राष्ट्रिय झन्डा गोरख परम्परामा रहेको हठयोगको प्रतीक त होइन ? भन्ने सन्दर्भ छ । हरिनन्दन ठाकुरले यसै प्रसंगलाई औँल्याएका छन्, ‘योग साधनाको दृष्टिमा यो राष्ट्रध्वजाको अर्थ गौरव र प्रकृष्टको प्रतीक हुन आउँछ । योगको परम्परा अनुसार चन्द्र इडा नाडीको प्रतीक र सूर्य पिंगलाको प्रतीक हो । प्राणायाम प्रक्रियामा यी दुवै नाडीहरूद्वारा श्वास क्रियाको नियन्त्रणदेखि सुषुम्णा खुलेपछि मात्र परब्रह्म परमेश्वरसँग साक्षात्कार हुन जान्छ।’
चन्द्रमा भनेका ज्ञान (ब्रह्म)का प्रतीक र सूर्य भनेका शक्ति र सृष्टिका प्रतीक हुन् । पृथ्वीनारायण शाहले प्राचीनकालदेखि चलेको यो झन्डालाई भक्तपुर विजय गरेपछि काठमाडौंलाई राजधानी र जयस्थिति मल्लले अपनाएको चन्द्र–सूर्य अंकित झन्डालाई राष्ट्रिय झन्डा बनाए भनि ‘द गोर्खा कन्क्वेस्ट’मा कुमार प्रधानले उल्लेख गरेका छन् (पृ.११४)।
चमर र छाता विशेष नहुनाले आकारप्रकार बदलिन सक्छन् । तर, राजध्वजका रंग, चिह्न र आकारप्रकार हत्तपत्त बदलिँदैनन् । राजध्वज जति स्थिर रह्यो राजवंश उति स्थिर रहन्छ भन्ने हिन्दू राजवंशमा चलिआएको छ । श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरका पछिल्ला मल्लवंशका पहिला राजा जयस्थिति मल्लले तयार गरेको हिन्दू जातिका जातीय रङ रातो भएको तुलको माथिल्ला पताकामा चन्द्र बिम्बको र तल्ला पताकामा सूर्य बिम्बको आकृति भएको तीनकुने दुई पताका भएका राजध्वजालाई आफ्ना राजध्वजाका रूपमा अपनाए,’ (पृ.३६२) ।
यसैगरी पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुर विजय गरेपछि गोरखा राज्यको सट्टा नेपाल राज्यमा नामाकरण गरिएको घोषणा गरे । यसरी विधिवत् रूपमा संवत् १८२६ मंसिर १ (१६ नोभेम्वर १७६९) मा नेपाल राज्यको भौगोलिक रूपमा जन्म भएको भनी बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ‘नेपालको सीमाना’मा लेखेका छन् (२०७३, पृ.८)।
शाहवंशीय राजाहरूले आपूmलाई श्री ५ को रूपमा र ज्ञानलाई माथि राखि श्री ६ का रूपमा आचार्य–गुरूलाई राखेको सन्दर्भले पनि त्यसैलाई इंगित गरेको हुनुपर्छ । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो गोर्खा राज्यको नाम नेपालमा नै समाहित गरेझैँ झन्डा पनि नेपाल उपत्यकामा चलेकोलाई नै अपनाएर दूरदृष्टि देखाएका छन्।
यसरी लिच्छविकालदेखि मन्दिरहरूमा रहेको वैदिक झन्डा पृथ्वीनारायण शाहका कारण एकीकृत नेपालको राष्ट्रिय झन्डाका रूपमा गौरवान्वित हुन पुग्यो । यो झन्डा बदल्न खोज्नेहरू पूर्वीय मान्यता र ज्ञान प्रणालीमाथि प्रहार गर्नेहरू हुन् । यस्ता काम गर्नेहरूबाट किमार्थ आफ्नो मौलिक परम्परा र ज्ञान प्रणालीको संरक्षण हुन सक्दैन । यो झन्डा बदल्न खोज्नेहरू राष्ट्रद्रोही र अराष्ट्रिय तत्व हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
चन्द्रमा भनेका ज्ञानका प्रतिक र सूर्य भनेका शक्तिका प्रतीक हुन् । पश्चिमा ज्ञान प्रणालीमा ज्ञान ठूलो कि शक्ति ठूलो भन्ने बहस छ । उत्तरउपनिवेश चिन्तनका व्याख्याता मिसेल फुकोको धारणा के रहेको छ भने मनोजगत्मा रहेका समर्पण र अतार्किक विश्वासको स्थिति नै उपनिवेश मात्र होइन, उत्तरउपनिवेश समेतको प्रमुख प्रेरक तंखव हो भन्ने कुरा निष्कर्षमा आएको छ।
पूर्वीय मान्यतामा ‘स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्या सर्वमानवाः’ भनिएको छ । यसको तात्पर्य हुन्छ– ‘पृथ्वीमा रहेका सबै मानिसहरूले यस ज्ञानभूमिका जन्मिएका ऋषि, मुनि, आचार्य र गुरूहरूले देखाएको बाटो र सिकाएको चरित्रलाई आत्मसात गरी व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । यो नै मानवको कर्तव्य हो । यसैमा मानव जातिको हित छ । गुरूकै नामबाट सामाजिक हैसियत वा चिनारी निर्धारण हुने प्रणाली जसलाई गोत्र भनेर जानिन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, ज्ञान प्रणालीलाई बढी महंखव दिएको पाइन्छ।
यो देशको नेपाल नाम नै किन रह्यो ? भन्ने सन्दर्भ पनि महत्वपूर्ण छ । यसको नाम ज्ञान प्रणालीसँग जोडिएको छ । ‘नेति नीतिः ताम्पालयति इति नेपालः’ यसको व्युत्पत्ति अनुसार नीतिको जहाँ पालन गरिन्छ त्यो नेपाल हो । अर्थात् नयाँ (नयेन) पाल्यते यः सः नेपालः का अनुसार नीति (ज्ञान) द्वारा पालित या परिरक्षित हुन्छ त्यो नै नेपाल हो भनी हरिनन्दन ठाकुरले लेखेका छन् (२०२६, पृ.५) । यस अर्थमा पनि ज्ञान प्रणालीमा नेपाल राष्ट्र बाँच्न सकेको मान्न सकिन्छ । झन्डाको चन्द्रपक्षलाई यसले प्रतिविम्बित गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ।
नेपाली ज्ञान प्रणालीमा ज्ञान र शक्ति दुवैलाई बराबरीको स्थान दिइएको छ । जुन कुरा नेपालको चन्द्र–सूर्य अंकित झन्डामा देखिन्छ । अझ ज्ञान (चन्द्रमा) लाई सूर्यभन्दा माथि राखिनुले ज्ञानले प्रमुखता पाएको छ । हाम्रा इतिहासमा राजाभन्दा आचार्य गुरू, ऋषि–महर्षि ठूला हुन्थे । ज्ञानले शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सकेन भने त्यो शक्ति विनाशक हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ।
मनुष्य जन्म जात स्वार्थी हुने हुनाले त्यसलाई ज्ञानबाट नियन्त्रण हुनुपर्छ । ज्ञान चन्द्रमा जस्तै शीतल हुन्छ र ठन्डा दिमाग (ज्ञान)ले कुनै पनि समस्याको समाधान निकाल्न सक्छ । यी दुई शक्तिको सन्तुलनबाट नै राष्ट्र वा समाजमा शक्ति सन्तुलन कायम हुन जान्छ । यो झन्डा नेपालको स्वतन्त्रताको प्रतीकमात्र नभएर पूर्वीय ज्ञान एवं मान्यताको प्रतीक हो ।
(लेखक अर्जुन ज्ञवाली र पेशल निरौलाद्वारा लिखित पुस्तक ‘गोरक्ष पद्धति’बाट साभार)
मंसिर ४ गते, २०७६ - १२:०७ मा प्रकाशित